Ny metro any New York, avy amin'ny mason'ny mpaka sary Andre D. Wagner | Famoronana an-tserasera
Ny sary Mila fikirizana ianao vao afaka maka sary tsara indrindraFarafaharatsiny, safidio ireo izay miavaka amin'ireo ambiny nataontsika nandritra ny taona maro. Ny fikirizana dia fitaovana tsara miankina amin'ny sitrapontsika hatrany hahazoana vokatra tsara kokoa, izay amin'ny faharetana kely dia misy zavatra maro azo tanterahina amin'ny fiainantsika.
Izany no tranga nahazo ny mpaka sary Andre D. Wagner, izay nitondra antsika tao amin'ny boky voalohany Here for the Ride talohan'ny fanangonana sary mahafinaritra an'i New York tanàn-dehibe fa imbetsaka ny cinema no nitondra an-tsary. Ny tena izy dia nanova ny fanaony andavanandro ho fotoana iray ity mpaka sary ity, satria nanomboka nandrakitra an-tsoratra nandritra izany andro izany izy rehefa nitaingina ny metro avy tany an-tranony nankany amin'ny toeram-piasany.
Io dia niova ho monograpo, izay misy sary 62 mampiseho ny tantaram-piainan'ny tanàna manokana, ary mihoatra ny iray lehibe sy manokana toa an'i New York.
Nanomboka tamin'ny 2013 ka hatramin'ny 2016 dia nanohy ny asany i Wagner ary Manohy ny fomban-drazan'ireo mpaka sary izay nanao ny tsy fahafatesan'ny Big Apple aho. Ny asany dia miavaka amin'ny mainty sy fotsy, endrika iray ahafahan'ity mpaka sary ity mahazo aina sy afaka maneho ny iray amin'ireo sary 62.
Araka ny filazany hoe: tiany ny firindrana vokarin'ny monochrome, ary tsy hisy ho hitanao fa mitombina toy ny pirinty amin'ireo loko roa ireo. Tahaka ireo nahazo aingam-panahy avy aminy, toa an'i Roy DeCarava na Robert Frank, dia nanaraka ny dian-tongony mainty sy fotsy izy.
Ny asa hita ao ny bokiny voalohany dia mitantara fitantarana mahery vaika ary manandrana mamoaka ny fanahy amin'ireo mpandeha izay hita tao anaty fiara iray ihany. Toy ny kapsily amin'ny fotoana, ireto sary ireto dia nanomboka tamin'ny taona nanoratan'i Wagner ny diany isan'andro namakivaky an'io tanàna lehibe io tamin'ny sary.
Afaka mahita azy indray ianao ao amin'ny tranonkalanao, na koa amin'ny instagram. foana hanana fotoana hiverina amin'ny lasa ianao amin'ny ity galeriam-panjakana amin'ny Internet any New York ity.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » maro » Taona maro nanoratana ny metro any New York: Ny asan'ny mpaka sary Andre D. Wagner